musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kisimusi uye Gore Idzva mazororo ekutengesa mahotera
Yasvika nguva yekubhuroka pekugara kweKisimusi uye zororo reGore Idzva! Yakakwana nguva yekushandisa iyo yasara HK $5,000 yevhoti yako yekushandisa inopera mukupera kwegore.
Trip.com iri kuvhura 11.11 Mega Kutengeswa kwemavhiki maviri kubva 1 kusvika 14 Mbudzi, paine angangoita maviri mahotera ane mukurumbira akavhurwa kubhuka kusvika ku50% kubva pazuva rega rega. Zvakatonyanya kunakidza iTrip.com "Triple Spending Privileges", iyo ichaita musi wa1 na11 Mbudzi, pachange paine 1) HK$111 makuponi; 2) 11% kubvisa makuponi; uye 3) madhiri emahotera neHK$11 chete.
Pamusoro pezvidzoreso zvakasiyana-siyana pazvinokwezva yakakurumbira uye matikiti ezviitiko akadai seKeigo Open House uye iyo "Jurassic X The Dinosaur Park" Exhibition, gumi ekutanga maodha musi wa10 Mbudzi matikiti eOcean Park neOcean Park Water World achakodzera kuwana. tikiti rechipiri paHK$11.
Kubva 1 kusvika 10 Mbudzi kutanga na11:11am zuva nezuva, uye kubva 00:00 (pakati pehusiku) musi wa11 Mbudzi, vashandisi veTrip.com vanogona kunakidzwa nekutengesa kweflash pamahotera akasiyana akasarudzwa paHK$111 kana HK$1,111. Izvo zvinopihwa ndezvekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro, ine isingasviki makumi mashanu emakamuri ehotera.